Jenezy 32 - Ny Baiboly
Jenezy toko 32
Jakoba nifanena tamin'ny Anjely, naniraka ho any amin'i Esao, nitolona tamin'Andriamanitra.
1Dia nanohy ny diany Jakoba ary ny anjelin'Andriamanitra nifanena taminy. 2Ka hoy izy nahita ireo: Tobin'Andriamanitra ity; dia nataony hoe Mahanaïma ny anaran'izany fitoerana izany. 3Ary nandefa iraka hialoha azy Jakoba, ho any amin'i Esao, rahalahiny, any amin'i Seira any an-tsahan'i Edoma. 4Nomeny teny ireo nataony hoe: Izao no holazainareo amin'ny tompoko, amin'i Esao: Izao no tenin'i Jakoba mpanomponao: Nitoetra tany amin'i Labana aho ary nijanona tany, mandrak'ankehitriny. 5Efa manana omby aman'ampondra sy ondry, ary mpanompo lahy amana vavy aho, ary mampilaza izany amin'ny tompoko, mba hahitako fitia eo imasonao.
6Fa niverina nankeo amin'i Jakoba ny iraka, ka nanao hoe: Nankany amin'i Esao rahalahinao izahay, ka indro tamy hitsena anao izy omban'olona efa-jato lahy. 7Raiki-tahotra mafy Jakoba sy velom-panahiana izaitsizy. Nozarainy ho antokony roa ny olona nomba azy, mbamin'ny ondry sy ny omby ary ny rameva. 8Fa hoy izy: Raha tafahaona amin'ny antokony iray Esao ka mamely azy, dia ho afaka hanavotra ny ainy ny antokony iray sisa.
9Ary hoy Jakoba: E! ry Andriamanitr'i Abrahama raiko, Andriamanitr'Isaaka raiko, Iaveh izay nilaza tamiko hoe: Modia any amin'ny taninao, sy any amin'ny fitoerana nahaterahanao, fa hanisy soa anao aho. 10Kely tsinontsinona aho, ka tsy mendrika ny fahasoavana amam-pahamarinana rehetra nataonao tamin'ny mpanomponao, fa ny tehiko ihany no taty amiko no nita ity Jordany ity aho; nefa indro efa tonga antokon'olona roa aho ankehitriny. 11Vonjeo re aho, ho afaka amin'ny tanan'ny rahalahiko, dia amin'ny tanan'i Esao; fa matahotra aho, fandrao avy mamely ahy, ary ny reny mbamin'ny zanany izy. 12Hianao anefa, efa nilaza hoe: Hanisy soa anao aho, ary hahamaro ny taranakao tahaka ny fasika any an-dranomasina izay betsaka loatra ka tsy tambo isaina.
13Dia nitoetra teo Jakoba tamin'iny alina iny. Ary nangalàny hatao fanomezana ho an'i Esao, rahalahiny, ny harena efa azony; 14osivavy roan-jato, osilahy roa-polo, ondrivavy roan-jato, ondrilahy roa-polo, 15rameva mitaiza am-pianahany telo-polo, sy ny zanany, ombivavy efa-polo, ombilahy folo, ampondravavy roa-polo, ary zanak'ampondra folo. 16Napetrany teo an-tanan'ny mpanompony ireo, nataony mitsitokotoko, dia hoy izy taminy: Mandehana eo alohako hianareo, ka asio elanelany isan-tokony ny zavatra. 17Ary izao no teny nomeny ny voalohany: Rahefa hifanena aminao Esao rahalahiko, ka hanontany anao hoe: An'iza hianao, ary ho aiza? Ary an'iza ity andiam-biby fiompy alohanao? 18dia valio hoe: An'i Jakoba mpanomponao ireo, dia fanomezana ampanateriny ho an'ny tompoko, ho an'i Esao, ary indro izy tamy ao aorianay ao koa. 19Nomeny teny torak'izany koa ny faharoa sy ny fahatelo, mbamin'izay rehetra nanaraka ny biby fiompy nataony hoe: Izao no holazainareo amin'i Esao, rahefa hifanena aminy hianareo; 20dia ataovy hoe: Indro, Jakoba, mpanomponao, tamy ao aorianay ao koa. Fa hoy izy anakampony: Hotoneko amin'ireo fanomezana eo alohako ireo ny fahatezerany, vao hahita ny tavany aho, ka angamba horaisiny tsara aho. 21Dia nandroso nialoha ny fanomezana, fa izy mbola nijanona teo amin'ny toby ihany, ny alin'iny.
22Tamin'iny alina iny ihany dia nitsangana izy, nalainy ny vadiny roa sy ny ankiziny roa vavy ary ny zanany iraik'ambin'ny folo lahy: dia nita tamin'ny fitàna tao Jabaoka izy. 23Nalainy ireo nampitainy ny rano, ary nampitainy koa ny fananany.
24Dia Jakoba irery sisa nijanona teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy, mandra-pahazava-ratsin'ny andro. 25Nony hitan-dralehilahy fa tsy naharesy azy izy, dia ny famavàn'ny feny no notendreny ka nivika tery ny fotopen'i Jakoba nandritra ny nitolomany taminy. 26Dia hoy izy tamin'i Jakoba: Avelao aho handeha, fa efa hazava ratsy ity ny andro. Fa hoy Jakoba: Tsy avelako handeha hianao raha tsy efa nitso-drano ahy. 27Dia hoy izy taminy: Iza no anaranao? Ary novaliany hoe: Jakoba. 28Ka hoy izy : Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao; fa hatao hoe Israely; satria efa niady tamin'Andriamanitra sy tamin'olombelona hianao ka nahery. 29Dia mba nanontany azy kosa Jakoba nanao hoe: Masìna hianao, mba ampahalalao ahy kely ny anaranao. Fa hoy izy: Ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitso-drano azy teo izy. 30Ary nataon'i Jakoba hoe Fanoely ny anaran'io tany io, fa hoy izy: Efa nahita an'Andriamanitra nifanatrika aho, nefa velona ihany ny aiko. 31Nony niala teo Fanoely izy, dia indro hitany niposaka ny masoandro; nitolitsika anefa izy tamin'ny foto-peny. 32Izany no tsy ihinanan'ny Zanak'Israely ny hozatra lehibe ao amin'ny famavàn'ny fe mandrak'androany, dia noho ny nanendren'Andriamanitra ny famavàn'ny fen'i Jakoba teo amin'ny hozatra lehibe. >